SEO ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ဘယ်လိုရှာရမလဲ Martech Zone
SEO ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ဘယ်လိုရှာရမလဲ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 14, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
ဒီနေ့မနက်မှာငါသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဖုန်းပြောနေတုန်းကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးတဲ့ Search Engine Optimization Services ကိုပေးဖို့သူ့ကိုဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။ သူကအခွင့်အလမ်းကိုတော်တော်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုထိတွေ့မှုပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေခဲ့တယ် Highbridge ... ဒါပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာနိုင်ဘူး။ ဒါကောင်းမယ်ဆိုရင်…ငါတို့စာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကဤကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုရလာသောအခါကျွန်ုပ်လုပ်သောအရာသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့် တူကိရိယာတခုကိုအသုံးပြုခြင်း Semrush။ သငျသညျညာဘက်အပေါ်ရလဒ်များကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင်ဒီရလဒ်တွေကသနားစရာကောင်းတယ်။ ငါ (ugh!) အဆင့်4ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းတို့သည်သက်တမ်းတစ်ခုတည်းတွင် (၃ နှင့်အထက်) အဆင့်အတန်းမမီပါ။
ဒီဟာကမှတ်စုတစ်ခု…မင်းကသူတို့ကိုအဲဒီလိုမျိုး site တစ်ခုမှာကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်တယ် Semrush ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရှာဖွေနေတဲ့ကုမ္ပဏီဟာ“ SEO” လိုမျိုးအပြိုင်အဆိုင်အသုံးအနှုန်းတွေကိုအဆင့်အတန်းမသတ်မှတ်နိုင်လို့ပါ။ Highbridgeဥပမာအားဖြင့်, နှင့်ဆက်စပ်အသုံးအနှုန်းများအပေါ်အဆင့် မီဒီယာအသစ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို၎င်းတို့အားစနစ်တကျအဆင့်သတ်မှတ်ပေးမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတန်ဆာပလာတွင်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ငါတို့သိတယ် Cross- ရုပ်သံလိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ သက်ဆိုင်သည့်ကြားခံ (SEO) အပါအ ၀ င်အကောင်းဆုံးသောအချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုအမှန်တကယ်သိပါသည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် Optimization အတိုင်ပင်ခံ, ဖြစ်နိုင်သည်အပေါ်စိစစ်အတည်ပြု ... စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွယ်ကူဆုံးအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ကောင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထက်မပိုကြည့်!
သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းပြုစုရန်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်း (၂) ခု